नायब सुब्बा प्रथम पत्र PREMIUM PLUS (Rs.1255/-)
खरिदार प्रथम पत्र PREMIUM (Rs. 350/-)
शाखा अधिकृत प्रथम पत्र PREMIUM PLUS (Rs. 1525)
खरिदार दोस्रो पत्र PREMIUM (Rs. 350/-)
शाखा अधिकृत दाेस्राे पत्र शासन प्रणाली PREMIUM (Rs. 650/-)
शाखा अधिकृत तेस्राे पत्र, समसामयिक विषय PREMIUM (Rs. 650/-)
खरिदार तेस्रो पत्र PREMIUM (Rs. 350/-)
नायब सुब्बा द्वितीय पत्र PREMIUM PLUS (Rs. 1075/-)
नायब सुब्बा द्वितीय पत्र PREMIUM (Rs. 550/-)
करीयर अपडेट BASIC
शाखा अधिकृत प्रथम पत्र PREMIUM (Rs. 650/-)
करीयर अपडेट PREMIUM (Rs. 500/-)
नायब सुब्बा प्रथम पत्र PREMIUM (Rs. 570)
करीयर अपडेट PREMIUM PLUS (999/-)
नायब सुब्बा प्रथम पत्र (६० सेट) (Rs. 375)
शाखा अधिकृत दाेस्राे पत्र शासन प्रणाली PREMIUM PLUS (Rs. 1150/-)
शाखा अधिकृत तेस्राे पत्र, समसामयिक विषय PREMIUM PLUS (Rs. 1150/-)
खरिदार तेस्रो पत्र BASIC
खरिदार दोस्रो पत्र BASIC
नायब सुब्बा – लेखन सहयोगी पुस्तिका (Writing Guide Book) Premium (Rs. 280)
Old Is Gold (पुराना प्रश्नपत्र संग्रह) -Rs.100 - लोकसेवा गाइड - Lok Sewa Guide
Welcome to Old Is Gold (पुराना प्रश्नपत्र संग्रह) -Rs.100
Old is Gold नामक यो स्तम्भमा पुराना प्रश्नहरुको संग्रह गरी राखिएको छ । लोक सेवा आयोग लगायतका प्रतियोगितात्मक परीक्षामा आएका पुराना प्रश्नहरुलाई संग्रह गरी यो स्तम्भ तयार गरिएको छ । परीक्षार्थीहरुलाई एकै द्वारबाट अनेक सुबिधा दिने उद्धेश्यले यो सेवा प्रदान गरिएको हो । लोक सेवा गाइडको सेवा लिएका पाठक तथा परीक्षार्थीका लागि पुराना प्रश्नहरु (Old Questions) हेर्नका लागि कुनै पुस्तकको सहारा लिनु नपरोस भन्ने उद्धेश्यले सामग्री राखिएको ब्यहोरा अनुरोध गरिन्छ ।
लोक सेवाको परीक्षा प्रणाली अनुसार परीक्षाको प्रश्न पत्र बाहिर ल्याउन नपाउने कतिपय बिषय तथा पत्रहरुकाे प्रश्नहरु परीक्षार्थीकाे सम्झनाको आधारमा टिपाेट गरी राखिएको छ ।
पुनश्चः पाठ्क्रम मिल्दो भएको बिषय तथा पदको हकमा पुरानाे पाठ्यक्रमका प्रश्नहरुलाई समेत प्रस्तुत गरिएको छ । कुनै शिर्षकबाट आउन सक्ने सम्पूर्ण प्रश्नको जानकारी परीक्षार्थीलाई होस भन्ने हेतुले यहाँ प्रस्तुत गरिएको हुँदा सोहि अनुसार जानकारी लिनु हुन अनुरोध छ ।